Ukucaciswa kokuba uJohn Cena 'ugqibile' ngeWWE (Exclusive) - Wwe
Ukucaciswa kokuba uJohn Cena 'ugqibile' ngeWWE (Exclusive)
UJohn Cena akazange akhuphisane kumdlalo weWWE phantse unyaka. Kodwa ngokutsho kukayise, i-16-yexesha leentshatsheli aligqitywanga, kwaye uyakubuyela kwindandatho yeWWE ngenye imini.
Ukusuka kwi-2002 ukuya kwi-2017, uCena wayengomnye weyona WWE Superstars isebenzayo kuyo yonke inkampani. Wayengubuso benkampani isithuba esimalunga neshumi leminyaka, kodwa uthathe inyathelo lokubuyela umlo kule minyaka mine idlulileyo ukuze agxile kwimidlalo yakhe.
UJohn Cena Sr uvele kwisiqendu sale veki I-UnSKripted ye-Sportskeeda Wrestling nge UGqr Chris Featherstone . Ngexesha lomboniso, waxela kwangaphambili ukuba unyana wakhe uza kuhlala ebandakanyeka kwishishini lokulwa ubomi bakhe bonke.
Ndicinga ukuba uJohn Cena uya kuhlala enxibelelana neWWE okanye ubungcali bokulwa ngendlela ethile okanye indlela. Ukulawula, i-backstage, i-NXT, nantoni na. Uya kuhlala eyinxalenye yelo shishini. Ndicinga ukuba sele ubona, kwaye ndim nje, kuncinci kwelinye icala akwenzayo ngoku. Akuthethi ukuba ugqibile. Ndiyathemba ukuba akukho mntu ukholelwa ukuba ugqibile ngenxa yokuba ukuxelwa kwam kwangaphambili ... kuphela ukuqikelela kwam, andikathethi kuye… uzakubuya.
Bukela le vidiyo ingasentla ukuva amanye amabali kunye nezimvo ezivela kuJohn Cena Sr. Ubuye waxoxa ngeGoldberg, iGreat Khali, kunye noRandy Orton, phakathi kwabanye.
UJohn Cena Sr. ngothando lonyana wakhe weWWE
UJohn Cena wasebenza noBray Wyatt eWrestleMania 36
UJohn Cena Sr. uthe unyana wakhe wayehlala esendleleni kunye neWWE ngeentsuku ezingama-325 zonyaka. Wongeze ukuba, ngonyana wakhe, uCena usacinga i-WWE 'njengentsapho yakhe.'
Umdlalo we-WWE kuphela we-Cena kwi-2020 wenzeka eWrestleMania 36 ngokuchasene no'T Fiend 'uBray Wyatt. Umdlalo we-cinematic uthathe imizuzu eli-13 kwaye waphela ngo-The Fiend ngokuchola uloyiso.
Ibonaka ingathi @JohnCena ngekhe uhlale ngaphandle @WrestleMania emveni kwakho konke... #WrestleMania #Ndiyabulela @WWEBrayWyatt #Ismack down pic.twitter.com/jTPhqfmIQO
-WWE (@WWE) NgoFebruwari 29, 2020
Owona mboniso mikhulu weWWE, iWrestleMania 37, izakubanjelwa eRaymond James Stadium eTampa, eFlorida ngo-Epreli 10-11. UCena uthethile kaninzi kwezi nyanga zidlulileyo ukuba akazukuvela kulomcimbi ngenxa yokuzibophelela ngokufota. Ndiyathemba ukuba uza kubuyela kwinkampani ngexesha elithile kungekudala.
Nceda uthenge ityala le-Sportskeeda Wrestling's UnSKripted kwaye ulungise ividiyo ukuba usebenzisa iikowuti ezivela kweli nqaku.
5 WWE Superstars ababezithiyile iingoma zabo zomxholo
EKHAYA '' ABANTU NABANTU 'Hov kwaye nibuyile'
Iinkcukacha zasemva kweqonga kwi-T-BAR elulekwa ligosa leWWE
I-5 yeWrestler eyomeleleyo kwiWWE namhlanje
Iimpawu ezili-15 zoMntu oQolileyo ngokweemvakalelo
Owona mqhubi mhle kakhulu ovela kumazwe angama-50 aseMelika
URosamund Pike uphumelele i-Intanethi emva kokuba 'NdiKhathalele uLote' emva kokuba enze iNetflix
Iindaba zeWWE: I-Superstar ithi 'akasekho Mnu Nice Guy' kwividiyo efihlakeleyo
Indlela yokuKhula kweNgqondo eya kubuguqula ngayo uBomi baKho (kunye nendlela yokuPhucula enye)
Pro Wrestling: Ukuhlawula iimfanelo
UDolph Ziggler kunye nabafazi kubomi bakhe beWWE
Indlela yokwenza ukuba umntu azive ebalulekile, ukhethekileyo kwaye uyathandwa
Reinterpretation Abazi Kukunika Iingcebiso Malunga Ebomini, Ulwalamano, Ingqondo, Umzimba Kunye Nomoya.
ulenza njani ixesha lihambe ngokukhawuleza
nini ixesha lokuqala le-4 liza kuba kwi-netflix
xa umntu ethetha ngawe emva kwakho
ukubeka umntu ezenza uzive ungcono
xa ubudlelwane bakho buyimfihlo
umqondiso umntu uyakhweleta ngawe
© 2021. All Rights Reserved. gov-civil-viseu.pt | Umthetho Wabucala